I-China isiciko esirinjiweyo esinebhokisi yokugcina ekhaya iikawusi ibhokisi yephepha lomvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Ibhokisi yokuGcina iphepha
isiciko esikhutshiweyo esinebhokisi yokugcina ekhaya iikawusi ibhokisi yephepha
izinwe iikawusi ibhokisi yokugcina
Ubukhulu: 35 * 35 * 35cm
Uhlobo lwePhepha: incence
Ubukhulu: E flut
Iinkcukacha zokupakisha: ii-pcs ezimbini kwi-polybag okanye kwimfuno yakho
Izibuko: Xiamen / Fuzhou
Ixesha lokukhokhela :
Ubungakanani (iibhokisi) 1 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Ixesha (iintsuku) 15 17 Kuya kuthethathethwana
Ukuthatha: oko kukuthi khetha izinto ezifanelekileyo zokupakisha, uyilo lokupakisha kusetyenziswa itekhnoloji yobukrelekrele, yokupakisha iimpahla zemodeli yolwakhiwo lwesikhongozeli kunye nokuhombisa kuyilo lomhombiso wokupakisha, ukuya kumbala wokupakisha, imilo, izinto kunye nezinye iintlobo zoyilo ulwimi, linika imveliso yorhwebo ubuntu obwahlukileyo, kodwa kunye nokusekwa komfanekiso ogqibeleleyo wokubonwa kwento leyo, njengemfuneko yabathengi ukugweba umgangatho wengqolowa kumququ, isabelo sokuyilwa kwephepha kweli phepha, amanqaku amahlanu kunye nezinto ezintathu eziphambili Sizama ukwaphula le bhokisi yamasokisi yokugcina ibhokisi ngeli nqaku.
Uyilo lokupakisha yiprojekthi elandelelanayo, efuna iinkqubo zesayensi kunye nocwangco kunye neendlela zokufezekisa ukupakisha ngempumelelo kunye nokwandisa inzuzo xa imveliso ibekwa kwintengiso. Qonda kuphela ukubekwa ngokuchanekileyo kwesicwangciso sokupakishwa kwemveliso, ngokutolika okuyimpumelelo kunye nokunikezelwa koyilo lokupakisha imveliso kunye nokudityaniswa okugqibeleleyo kwengcinga yentengiso yeshishini, ukuze ukwazi ukuyila.Le bhokisi yokugcina iikawusi ayiyinkqubo elula Uyilo kwimveliso kwaye ekugqibeleni luboniswe kubathengi.
1. Amanqaku amahlanu aphambili kuyilo lokupakisha
Umsebenzi wokupakisha kukukhusela iimpahla, ukuhambisa ulwazi ngemveliso, ukulungele ukuyisebenzisa, ukulungele ukuhambisa, ukukhuthaza ukuthengisa. Njengesihloko esibanzi, ukupakisha kunentlobo ezimbini zokudibanisa imveliso kunye nobugcisa. Uyilo oluyimpumelelo lokupakisha kufuneka lube nezi ngongoma zintlanu zilandelayo:
(1) Impembelelo yeshelf
(3) Indlela yokubonakala
(4) uphawu lwentengiso
(5) Inkcazo yemisebenzi kunye neempawu
Ndicinga ukuba ibhokisi yokugcina iikawusi enika wonke umntu ilunge kakhulu, luhlaza oqaqambileyo yitoni yayo enobunzima yi-tonal, ilungele ukugcinwa kwendlu kakhulu, kumnandi kwaye kuyonwabile.
2. Iimpawu zenkangeleko yezinto ezisetyenziswayo
Inkangeleko yenkangeleko kukuvela kwempahla yokubonisa impahla, kubandakanya ubungakanani bomphezulu, ubungakanani kunye nemilo. Zintathu iifom esizibonayo kubomi bethu bemihla ngemihla, ezizezi, ubume bendalo, ubume bokufakelwa kunye nefom yengozi. Kodwa xa sifunda uhlobo lwemveliso, kufuneka sifumane ifom esebenzayo kuyo nayiphi na ipropathi, oko kukuthi, ukufumanisa ukuqheleka okuqhelekileyo, kwaye siyibize ngokuba yinto engekhoyo.
Siyazi ukuba umgaqo-siseko wefom yinto yefom, okanye le yinto yefom, iifom ezihlala ziguquka ezenziwa ngeendlela ezithile kunye nemigaqo. Ifom yenziwe ngamanqaku, imigca, iinqwelomoya kunye nemizimba. Iifomathi zokupakisha ikakhulu zibandakanya isilinda, i-cuboid, ikhowuni, iifom ezahlukeneyo kunye nokudityaniswa kweefom ezinxulumene noko, kunye neefom ezahlukeneyo ezenziwa kukusikwa okungafaniyo. Ukutsha kweefom zokupakisha kudlala indima ebaluleke kakhulu kwisikhokelo sokubonakalayo sabathengi, kwaye iifom ezibonakalayo ezizodwa zinokubashiya abathengi benomdla wokushicilela. Abaqulunqi bokupakisha kufuneka baziqhelanise neempawu zezinto zefom kunye neenkcazo zabo, kwaye bakuthathe oku njengezinto zokubonisa ubuhle befom.
Xa sijonga izinto ezibonakalayo kuyilo lokupakisha, kufuneka siyiqonde nakwi-Angle yomthetho wobuhle obusemthethweni. Ngokomgaqo osemthethweni wobuhle bokuyila okudityanisiweyo kunye neempawu zemisebenzi eyimveliso, izinto ezahlukeneyo ziya kudityaniswa ngokwendalo kwaye ngokwendalo zidityaniswe ukufumana umfanekiso oyimanyeneyo ogqibeleleyo.
Le bhokisi yeekawusi igcinwe ikwimo yesiciko kunye nesiseko. Isifaki senziwe ngenkcenkce, esahlula ibhokisi enkulu kwizikwere ezincinci ezifanelekileyo iisokisi. Olu hlobo lwebhokisi luthandwa ngakumbi ngabathengi.
3. Izinto zokwenziwa
Ubume ngumfanekiso opheleleyo wophawu lwentengiso, imizobo, isicatshulwa kunye nokudityaniswa kumphezulu wokubonisa wokupakisha kwempahla. Ukudityaniswa kwamacala amane kunika isiphumo esipheleleyo sokupakisha. Uyilo lweemveliso zezinto zophawu lwentengiso, imizobo, isicatshulwa kunye nombala wokusetyenziswa kokuchanekileyo, okufanelekileyo, okuhle, kunokubizwa ngokuba yimisebenzi yoyilo egqwesileyo.
Uphawu lwentengiso luphawu, lishishini, iziko, imveliso kunye nomfanekiso wesimboli ngamnye. Iimpawu zorhwebo zibandakanya ezopolitiko, ezoqoqosho, inkqubo yezomthetho, ubugcisa kunye nezinye iinkalo. Uphawu lwentengiso lugqitywa ngumsebenzi, ifom. Ifuna ukuveza umxholo osisityebi ngendlela elula nephangaleleyo kwisithuba esincinci, kwaye kwangaxeshanye ifuna umbukeli ukuba ayiqonde intsingiselo yangaphakathi ngexesha elifutshane. Ngokubanzi, iimpawu zorhwebo zingahlulwa zibe ziifom ezintathu: uphawu lwentengiso, uphawu lwentengiso kunye nokudityaniswa kokubhaliweyo kunye nemizobo. Uyilo lwentengiso eyimpumelelo kufuneka ibe yimveliso yokudityaniswa kwendalo kwintetho yokuyila. Ukuyila kukudibanisa, ukuhlalutya, ukwenziwa kunye nokwenza ngokubanzi umxholo othile ngokweemfuno zoyilo. Ngokucinga kwefilosofi, umxholo woyilo uguqulwa ukusuka ekubonakalisweni okungafaniyo kuyilo lomfanekiso wekhonkrithi.
Inani lomhombiso wokupakisha ikakhulu libhekisa kumfanekiso wemveliso kunye nomnye umfanekiso wokuhombisa oncedisayo. Imizobo, njengolwimi loyilo, kukubonisa izinto zangaphakathi nangaphandle zomfanekiso kunye nokuhambisa ulwazi kubathengi ngohlobo lwemifanekiso ebonakalayo. Ukulungiselela le njongo, ukubekwa ngokuchanekileyo koyilo lwegraphic kubaluleke kakhulu. Inkqubo yokuma yinkqubo yokuqhelana nomxholo wonke weemveliso, kubandakanya uhlobo lwempahla, uphawu lwentengiso, intsingiselo yamagama emveliso kunye nenqanaba leemveliso ezifanayo kunye nezinye izinto ezinokuthi ziqhelene kwaye zifundwe.
Imizobo inokwahlulwa ibe yimizobo ebonakalayo kunye nemizobo yokuhombisa ngokweendlela zazo zokubonisa.
Ukusetyenziswa kobuchule bokupeyinta, ukufota, njl njl. Ukupeyinta yeyona ndlela iphambili yoyilo lokuhombisa, ngokomxholo opheleleyo wokupakisha kufuneka uzobe imifanekiso, yeempahla. Xa kuthelekiswa nomfanekiso wefoto, inempawu zenkululeko yokuzikhethela, ukucokisa kunye nokwenza ngokubanzi. Ukupeyinta yindlela yokwazisa, ukuhombisa kunye nokuthengisa iimpahla. Nangona kunjalo, imeko yorhwebo yokupakisha yorhwebo inquma ukuba uyilo kufuneka lubonakalise owona mfanekiso wentengiso kwaye inike abathengi umfanekiso obonakalayo. Ke ngoko, ukufota yeyona ndlela ibalaseleyo yokubonisa owona mfanekiso ubonakalayo kunye nobonakalayo ekupakisheni nasekuyileni umhombiso.
Yahlulwe yangamacandelo okumelwa kunye nobuchwephesha bokubonisa. Amanani okomfuziselo, imihlaba, izilwanyana okanye izityalo zinokusetyenziswa njengemifuziselo yokufuzisela ukumela imixholo kunye neepropathi zephakeji. Inkqubo ye-Abstract isetyenziselwa ukwenza i-brushwork simahla, sebenzisa ichaphaza elingathambekiyo, umgca, imilo yejometri yobuso, isiqwenga sombala okanye isiphumo sokwakheka kokwenza umfanekiso, omfutshane, okhaliphileyo, onengqiqo, kwaye ibe yeyona ndlela iphambili yokubonisa ukuhombisa. Ngokubanzi, ifom yekhonkrithi kunye nokubonakaliswa okungabonakaliyo akuhlukaniswanga ekupakisheni nasekuyileni umhombiso, kodwa zidityaniswe kunye.
Ukudityaniswa komdibaniso womxholo kunye nefom ngumgaqo oqhelekileyo kuyilo lwegraphic, kwinkqubo yoyilo, ngokweemfuno zomxholo wegraphic, khetha ubuchule obuhambelanayo bokumela, ukufezekisa umanyano lwefom kunye nomxholo kuyilo lwegraphic, yenza Ibonakalisa umoya wobudala, isitayile sobuhlanga esisebenzayo, uqoqosho, umhombiso uyilo oluhle yimfuno esisiseko yoyilo lokupakisha.
Le bhokisi yokugcina iisokisi incence yeyokugcina indlu. Ke ngoko, uyilo lwayo aludingi kugxininisa indalo yophawu lwentengiso, kodwa kufuneka luqwalasele uyilo lwegraphic. Ukusetyenziswa kweempawu zeKrisimesi kwenza ukuba ibhokisi ibonakale intofontofo.
Uyilo lwemibala luhlala kwindawo ebalulekileyo kuyilo lokupakisha. Umbala yinto ebalulekileyo ekuhombiseni nasekuqaqambiseni iimveliso. Ukusetyenziswa kombala wokupakisha ngumbono wokuyilwa komfanekiso opheleleyo, ukwakheka kunxibelelene ngokusondeleyo. Ukupakisha iimfuno zombala wokucaba, i-homogenization, lo ngumbala wecebo lokucoca ulwelo, ucoce ukuphakama kwesishwankathelo. Isekwe kunxibelelwano lwabantu kunye nemikhwa yemibala, inqanaba eliphezulu lokubaxa kunye nombala yindlela yokupakisha ubugcisa. Kwangelo xesha, umbala wephakheji kufuneka ukhawulelwe ngenkqubo, izixhobo, ukusetyenziswa kunye nendawo yokuthengisa.
Egqithileyo Iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenziwe
Okulandelayo: Iibhokisi zesipho esenziwe ngentando ezenziwe ngebhokisi ekumgangatho ophezulu
Iibhokisi zeZipho eziMiselweyo
Uyilo lweBhokisi yokuPakisha
Iibhokisi zeZipho zeZacholo
I-CD yePhepha lokuGcina ibhokisi yeDesika yeCosmetic ...
| --Ibhokisi yokuGcinwa kwePhepha lePosenti / ugcino lweKhaya ...
zekhadibhodi ingwevu iphepha lokugcina iphepha le-unde ...
Umgangatho ophezulu wokushicilela idesika yokuqokelela ...
Ibhokisi okanye ibhokisi yokugcina iphepha ekhaya kunye ikepusi enkulu ...
UKUQONDA SIMAHLA 0086-18850140115
IDILESI Ukwakha 4, No. 20, Zhaoyu Road, Gaishan Town, Fuzhou, Fujian, China
I-logo eprintiweyo yokuprinta ikofu engama-350g kwiphepha elimhlophe ibhokisi yangaphandle
Ibhokisi yamaphepha okhathalelo lolusu ifakwe kunye nebhokisi yohlobo lwePVC
© Copyright - 2020-2023: Onke amalungelo agciniwe.